Linux dia devoly | Avy amin'ny Linux
Devoly ny Linux
herim-po | | hafa
Ry namana ahdezzz ao amin'ny forum mamoaka anay tantara mahaliana momba ny Linux sy ny fomba fiasany.
Tsy isalasalana fa maro no ho tia an'io blackmetaleros rehefa miresaka zavatra demonia
Isika izay nanararaotra nahafantatra ny tontolon'ny LINUX, dia mahafantatra fa izao tontolo izao mikorontana, izay aseho ny ratsy, ny demonia ary ny hafahafa amin'ny fomba mampivarahontsana sy masiaka indrindra amin'ny fanehoan-kevitr'izy ireo.
Linux no mutation farany an'ny rafitra fiasa taloha antsoina hoe UNIX, ary nandova ny ankamaroan'ny fototarazo lahy izy. Mbola ratsy kokoa noho izany aza, amin'izao fotoana izao ny olona rehetra dia azo atsofoka, tsy misy antony ary tsy am-piheverana, ho any ambanin'ny tany feno zavaboary hafahafa, ozona ratsy, ary komando maizina.
Eo afovoan'ny mpizara Linux tsirairay dia miaina monolita lehibe antsoin'ny tsirairay ny voan-kernel. Manodidina azy io, hipetraha amina antokon'olona ratsy fanahy, antsoina hoe dingana. Toa tsy misy mahalala, azo antoka, hoe ho an'iza izy ireo. Rehefa afaka 20 taona niainany tao amin'ny Linux / Unix dia afaka mahafantatra ny sasany ny olona ary mahalala izay ataon'ny sasany aza. Na izany aza, ny ankamaroan'ny olona dia miaina incognito, miasa mora, mankatoa ny torolàlana momba ny voan-kernel ary mitroka ny fiainana amin'ny solosaintsika.
Amin'io fotoana io dia manjary tsy milamina ... Maro amin'ireo fomba ireo no lasa demonia (daemon). Mahagaga sy mihoatra ny natoraly toa ny hoe demonia dia tsy mampiasa ody na ozona hamokarana. Mampiasa fork (fork) izy ireo mba hamoronana demonia hafa antsoina hoe ankizy na ankizy (zaza), izay manahaka ny mpamorona azy ary manaraka an-jambany ny diany.
Ity purgatory ity dia afaka maniry sy manitatra samirery. Linux amin'ny maha-rafitra fiasa be mpampiasa sy be asa azy, an-jatony amin'ireo daemon kely ireo dia azo noforonina mba hikarakarana olona iharan-doza iharan'ny fidirana amin'ny rafitra; mamadika ny mpizara ho tena helo, feno demonia, samy manana ny fiainany sy ny sitrapony avy.
Rehefa milatsaka ny isan'ny mpampiasa dia misy zavatra mahatsiravina mitranga. Ireo ray aman-dreny demonia dia manomboka mamono (mamono) ny zanany (zanany), tsy misy indrafo na mangoraka. Ankoatr'izay, misy baiko mahatsiravina hamono azy rehetra (killall) izay mampatahotra noho ny haben'ny famonoana mety hitranga. Ho an'ny famindram-po feno famindram-po dia misy ny famonoana olona malemy paika, ary ho an'ny lozabe indrindra dia ny famonoana olona mafy. Tsy mila fanazavana ny didy famonoana olona feno laza ratsy laza. Araka ny hitanao dia be dia be ny karazana fahafatesana mety hitranga.
Mampihoron-koditra anao ve izany? Andraso hamaky ity:
Indraindray mifarana na "maty" (maty) ny fizotry ny zaza iray nefa tsy fantatry ny ray aman-dreniny na ny mpamorona azy. Voalaza fa ny fizotry ny zaza dia miditra amin'ny fanjakana efa tsy mandeha intsony na fantatra amin'ny hoe zombie. Andriamanitra ô! … Zombies ??? … Ny fizotran'ny zaza mampalahelo, efa toy ny zombie, tsy misy fahatsiarovany samirery, ary mandehandeha, tsy misy ilana azy, tsy tsikaritr'ireo, amin'ireo dingana mavitrika hafa ao amin'ny rafitra.
Tsy toy ny daemon sy ny fizotran'ny "normal", ny fizotry ny zombie atahorana tsy voaro amin'ny baiko mamono. Mahery setra, ny rainy irery ihany no manana fahefana hanala azy, rehefa ampianarina amin'ny baikon'ny fiandrasana izy, ary hanafaka azy amin'ny fahasarotany amin'ny fanesorana ny karapanondrony amin'ny latabatra fizahana mivantana izy; farany mandefa azy any amin'ny toerana manokana alehan'ny fizotrany rehefa tapitra ny fisiany. Raha manohitra ny fizotran'ny ray aman-dreny dia voatery hamono (mamono) ny fizotran'ny ray aman-dreny ny mpitantana ny rafitra, izay hiteraka fahafatesan'ny zanany rehetra, ny fizotrany ary ny zombie… .. Famonoana tsy misy indrafo.
Etsy ankilany, misy ihany koa ny fizotry ny kamboty (kamboty), izay ny rainy sy ny mpamorona no namarana ny fisiany. Amin'ity tranga ity, ny fizotry ny kamboty dia raisin'ny fikambanana fara tampony mihosin-dra, ilay demonia lehibe mpamorona demonia rehetra, antsoina hoe init. Manomboka izao dia izy no hifehy ny asan'ny kamboty amin'ny androm-piainany sisa. Mba hiantohana ny fanarahan-dalàna tsy azo iadian-kevitra izay takian'i init, ny ankamaroan'ny daemon ao amin'ny rafitra Linux / Unix dia tokony ho kamboty! Amin'izay fotoana izay vao afaka mifehy tanteraka ny helo ratsiny ny init ratsy.
Ny satana na i Losifera amin'ity helo ity, antsoina hoe superuser (su), no ilay avy amin'ny toerana tena voatahirin'ny console (console) maizina indrindra izay mitarika ny fiafaran'ity tontolo ambanin'ny matoatoa ity. Izy no eo an-tanan'ny rantsan-tanany, mihazona ny fahefana hamorona sy hitantana hello marobe; ary manandrana mamorona demonia, mamono azy ireo ihany avy eo.
Tantara mampatahotra iray manontolo….
Mazava ho azy fa ny eritreritra ratsy an'ny mpanangana UNIX, tamin'ny faran'ny taona 60, dia nitondra voaly devoly izay 40 taona taty aoriana, dia mbola mitoetra ao amin'ny rafitra fiasa sy ny karazany rehetra. Ho santionany dia marihiko fa ny FreeBSD, rafitra miasa hafa toa UNIX, dia nandray imp.
Isika izay resin'ny faharatsiana manintona an'ity haitao ity dia voaheloka hiaina eo ambany herin'ny maizina, voafandrika sy mirenireny, tsy misy faniriana hahafantatra na hijery tontolo hafa.
Miaina mambabo antsika ny fisarihan'ny ratsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » hafa » Devoly ny Linux
hehe, tena tsara, izany no antony "canonical" tsy mifanaraka amin'ny tontolon'ny Linux. ^ _ ^
Ary izy ireo no zavatra mampidi-doza indrindra misy amin'ny Linux miaraka amin'ny drafitra ampihimamba azy ireo
Droid dia hoy izy:
teo am-pamakiana ny tantara manontolo dia noheveriko an-tsaina tamin'ny lova na tron ​​... hehe
Mamaly an'i Droid
Lol, antenaiko fa ny sarimihetsika faharoa 😛
Fomba ahoana ny tantara !!! Ary tsy tiako ny fampihorohoroana. o.0
Marina izany, aleonao poser izay mampiasa gutturals sandoka ary manao reggaeton amin'ny gitara.
Paefes dia hoy izy:
Ankoatry ny maha-satana azy, ny kominista dia kominista ary mialoha ny firaisan'ny samy lehilahy na samy vehivavy, ny fampiasana zava-mahadomelina fanindronana, ary manaparitaka hevi-diso toy ny hoe ny magy no ray aman-dreny sy heretika.
Valiny tamin'i Paefes
Matotra ve ianao sa maneso? Diso ny fanesoana amin'ny fanoratana
Matotra ve sa fanesoesoana no anontanianao ahy raha matotra izy sa maneso? Heck, ho an'ny sasany dia manasarotra ilay antsoina hoe fahatsapana ho mahatsikaiky.
Zava-dehibe izany, indraindray ve ny mahatsikaiky dia tratra an-tsoratra, ary manahirana ahy izany.
Ary satria misy ny tsirairay any ... Tsy hitako izay eritreretina
HAHAHAHA aza manahy…. Sarotra aminy ny mahatakatra ny hafa, ary tsy milaza aminao koa aho fa sarotra amintsika ny mahatakatra azy LOL !!!
ahahaha fantatro fa mbola tiako ny vehivavy XDDD
Ary izaho hahahaha
Tsy maintsy ho izany no antony Linux ny hiran'i Fahamarinana masiaka, fanapotehana omby, fandringanana, mpamono olona y Fanondroana fahantrana... ankehitriny avelao aho hanazava ...
\_ m / \_ m / \_ m / \_ m / \_ m / \_ m / \_ m / \_ m / \_ m / \_ m / \_ m / \_ m / \_ m / \_ m / \_ m / \_ m / \_ m / \_ m / \_ m / \_ m / \_ m / \_ m / \_ m /
Soa ihany fa tsy izaho irery no mahazaka Death Metal intsony
David Segura M. dia hoy izy:
Tena tsara ny tantara, nampatsiahy ahy ny tantaran'ny iray amin'ireo "taloha" rpg, Diablo II, nahaliana ahy ny tantaran'izy ireo.
Na izany aza, tonga izao nefa, fantatro fa tsy avy amin'ny Courage ny tantara, fa avy any ahdezzz, fa misy mania ratsy izay tsy tiako mihitsy:
Ity dia tontolo sordid, izay misy ny ratsy, ny demonia ary Herim Izy io dia aseho amin'ny endrika mampivadi-po indrindra sy masiaka indrindra amin'ny fanehoany azy.
Ny fitenenana anglisy mahasarika izay misy heviny tianao hampiasaina, fa amin'ny teny Espaniôla dia midika zavatra hafa be dia be: be herim-po.
Valiny tamin'i David Segura M.
hafahafa -rra. Amin'ny Espaniôla dia midika hoe 'be herim-po, miasa mafy' izy io: "Tonga ny kapiteny Andrés Cuevas, mpiady hafahafa manafatra baomba" (Matos Noche [Cuba 2002]); ary 'lafo vidy, be rivotra': «Ny fahatanoranao dia ho tonga maitso hafahafa sy mahery noho ny taloha» (Luján Espejos [Esp. 1991]).
Ny fampiasana azy dia tokony hialana amin'ny hevitry ny 'hafahafa na mihoampampana', fandikan-teny semikana manaratsy ny anglisy frantsay na hafahafa: mariky ny tsy fahamarinana."— Anarana hafahafa io. "Tsy tamin'ny fotoana nahaterahanao tany Sydney ary Australiana ianao" (Leyva Piñata [Mex. 1984]). Ary tsy tokony hampiasa hafahafa amin'ny hevitry ny 'hafahafa na mihoampampana'.
Diksionera Panhispanic of Doubts © 2005
Real Academia Española © Zo voatokana
hernando Sanchez dia hoy izy:
Ny zavatra rehetra eto amin'ity tontolo ity dia manana ny lafiny tsara sy ny lafy ratsy, miankina amin'ny safidy. Ho ahy dia manandrana misafidy ny tsara aho ary hisoroka ny ratsy. Mikasika ny fitsipi-pitenenana izay ampiasaina amin'ny fandaharana dia miankina betsaka amin'ny tsiron'ny programmer adala, ary koa amin'ity asa ity dia azon'izy ireo atao ny mitarika hafatra tsy dia atokisana ary tsy manana hevitra ny olon-tsotra, saingy tsy amin'ny linux ihany io; ka tsy tokony hatoky izay rehetra omeny antsika isika, na maimaim-poana izany, na maimaim-poana na ara-barotra.
Mamaly an'i hernando Sanchez
Extremadura dia mamela an'i LinEx